ဆီးအောငျ့ထားခွငျးနှငျ့ ကနျြးမာရေး - ApannPyay Media
ယခုတဈပတျ ဆှေးနှေးခငျြတာက. တော့ဆောငျးတှငျးလညျး ဝငျလာပွီ ဖွဈတဲ့အတှကျဆီးအောငျ့ထားခွငျး နှငျ့ ကနျြးမာရေး အကွောငျးဆှေးနှေးထားပါတယျ။
ယခုလို ဆောငျးရာသီကာလ. မှာ ကနျြတျောတို့ လူငယျအမြားစု ရော လူကွီးမြား ရော ရဲ့ ညဘကျ ဆီးသှားခွငျး အလုပျတဈခု ဖွဈလာပါတယျ။လူငယျ အမြိူးသားမြား ညဘကျ ဘီယာသောကျတကျသူမြား၊ ရာသီဥတု အေး၍ ရနှေေးသောကျ ကွသောလူကွီးသူမ. မြားအနဖွေငျ့ ဆီးခဏခဏ. သှားကွပါတယျ။
မအိပျခငျအခြိနျထိတော့ ဆီးသှားရတာ ပွသနာ မရှိပမေယျ့ အိပျပြျောနတေဲ့ အခြိနျ ဆီးသှားခငျြလာရငျထ. ပွီးမသှားကွဘဲ အောငျ့ထား တကျကွပါတယျ။ဆီး ဆိုသညျမှာ ခန်တာကိုယျ ရဲ့ အစိတျအတောကျမြားစု ဝေးရါ နရောပါ။
အညဈအကွေး မြား အဆိပျအတောကျ မြားဟာစုဝေးနခြေိနျ ဆီးကို သှားခငျြပါလြှကျ အောငျ့ထားပွီးမိုးလငျးမှ သှားမယျကှာ ဆိုပွီး အောငျ့ထားခွငျးက.အန်တာရာယျ မြားပါတယျ။ခန်တာကိုယျ က. လှဲလြောငျး အနအေထား နဲ့ဆိုတော့ ဆီးက. ကြော ဘကျမှာ ပြံနတေဲ့ အနအေထားမှာ ဖွဈနနေိုငျတာပါ။
ထိုအခါ ဆီးရဲ့အဆိပျ အတောကျမြားဟာ ဆိုရငျ ခန်တာကိုယျကိုပြံနှံနိုငျခွေ ပိုမြားလို့ပါ။ထိုအခါ ခါးနာ ခါးကိုကျ ကြောရိုးနာ စသောညောငျးညာ ခွငျး ကိုကျခဲခွငျးမြား ဖွဈတကျပါတယျ။သတိထားပွီး နထေိုငျကွညျ့ပါ။ အိပျယာ နိုးနိုးခွငျးညောငျးနသေလို ခံစားရပါတယျ။
ထို့ကွောငျ့ လူကွီးသူမမြား အနဖွေငျ့လညျး ညဘကျ ဆီးအိုး ၊ ဆီးဘူး အိပျယာ အနီး ထားအိပျပါ ။ဆီးသှားခငျြလြှငျ ထသှားပါ။ အောငျ့မထား ပါနဲ့။လူငယျမြား အနဖွေငျ့လညျး ရောဂါ မမှေးပါနဲ့ဆီးက. အရေးကွီးပါတယျ။
ဆီးအောငျ့ ဆီးပူ တာက. အစ. ကြောကျကပျ ရောငျခွငျး အောငျ့ခွငျး ကြောကျကပျ ရောဂါ တကေ. အစ. ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ထို့ကွောငျ့ ယခုလို ဆောငျးကာလ. မှာ ဆီးအောငျ့ထားခွငျး မပွုလုပျမိစေ ရနျ သတိပေး ဆောငျးပါလေး မြှဝလေိုကျပါတယျ။ရောဂါဘယ. ကငျးဝေးပါစေ။
လိုအပျခကျြ လေးမြား ရှိပါက. စာအရေးအသား လိုအပျနသေေးလို့ပါ ခှငျ့လှတျပါ။
ယခုတစ်ပတ် ဆွေးနွေးချင်တာက. တော့ဆောင်းတွင်းလည်း ဝင်လာပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆီးအောင့်ထားခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေး အကြောင်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ယခုလို ဆောင်းရာသီကာလ. မှာ ကျန်တော်တို့ လူငယ်အများစု ရော လူကြီးများ ရော ရဲ့ ညဘက် ဆီးသွားခြင်း အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။လူငယ် အမျိူးသားများ ညဘက် ဘီယာသောက်တက်သူများ၊ ရာသီဥတု အေး၍ ရေနွေးသောက် ကြသောလူကြီးသူမ. များအနေဖြင့် ဆီးခဏခဏ. သွားကြပါတယ်။
မအိပ်ခင်အချိန်ထိတော့ ဆီးသွားရတာ ပြသနာ မရှိပေမယ့် အိပ်ပျော်နေတဲ့ အချိန် ဆီးသွားချင်လာရင်ထ. ပြီးမသွားကြဘဲ အောင့်ထား တက်ကြပါတယ်။ဆီး ဆိုသည်မှာ ခန္တာကိုယ် ရဲ့ အစိတ်အတောက်များစု ဝေးရါ နေရာပါ။
အညစ်အကြေး များ အဆိပ်အတောက် များဟာစုဝေးနေချိန် ဆီးကို သွားချင်ပါလျှက် အောင့်ထားပြီးမိုးလင်းမှ သွားမယ်ကွာ ဆိုပြီး အောင့်ထားခြင်းက.အန္တာရာယ် များပါတယ်။ခန္တာကိုယ် က. လှဲလျောင်း အနေအထား နဲ့ဆိုတော့ ဆီးက. ကျော ဘက်မှာ ပျံနေတဲ့ အနေအထားမှာ ဖြစ်နေနိုင်တာပါ။
ထိုအခါ ဆီးရဲ့အဆိပ် အတောက်များဟာ ဆိုရင် ခန္တာကိုယ်ကိုပျံနှံနိုင်ခြေ ပိုများလို့ပါ။ထိုအခါ ခါးနာ ခါးကိုက် ကျောရိုးနာ စသောညောင်းညာ ခြင်း ကိုက်ခဲခြင်းများ ဖြစ်တက်ပါတယ်။သတိထားပြီး နေထိုင်ကြည့်ပါ။ အိပ်ယာ နိုးနိုးခြင်းညောင်းနေသလို ခံစားရပါတယ်။
ထို့ကြောင့် လူကြီးသူမများ အနေဖြင့်လည်း ညဘက် ဆီးအိုး ၊ ဆီးဘူး အိပ်ယာ အနီး ထားအိပ်ပါ ။ဆီးသွားချင်လျှင် ထသွားပါ။ အောင့်မထား ပါနဲ့။လူငယ်များ အနေဖြင့်လည်း ရောဂါ မမွေးပါနဲ့ဆီးက. အရေးကြီးပါတယ်။
ဆီးအောင့် ဆီးပူ တာက. အစ. ကျောက်ကပ် ရောင်ခြင်း အောင့်ခြင်း ကျောက်ကပ် ရောဂါ တေက. အစ. ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် ယခုလို ဆောင်းကာလ. မှာ ဆီးအောင့်ထားခြင်း မပြုလုပ်မိစေ ရန် သတိပေး ဆောင်းပါလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ရောဂါဘယ. ကင်းဝေးပါစေ။
လိုအပ်ချက် လေးများ ရှိပါက. စာအရေးအသား လိုအပ်နေသေးလို့ပါ ခွင့်လွတ်ပါ။